पनौती रंगशालाको जग्गा विवाद दर्ता खारेज होला त ? « News of Nepal
पनौती रंगशालाको जग्गा विवाद दर्ता खारेज होला त ?
स्थलगत सर्जमिनमा उजुरीकर्ताहरुले पहुचको आधारमा आफ्नो नाममा दर्ता गरिएको जग्गा खारेज हुुनुपर्छ भनेका छन् । कणेल परिवारले आफ्नो पुख्यौली सम्पत्ति भएको भन्दै ९८ साल देखिको प्रमाण पेश ।
‘रंगशाला निर्माणको क्रममा मात्र सार्वजनीक चौरलाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको रहेछ भन्ने थाहाभयो त्यहि भएर म लगाएत स्थानीय ८० जनाले जग्गा बदर गर्न मन्त्रालयमा निवेदन दिएका हौं’ स्थानीय विश्वेश्वर वञ्जाराले भने– यो जग्गा सार्वजनीक हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । सार्वजनीक जग्गालाई पहुचको आधारमा ३१ सालमा नापी गराई कणेल परिवारले आफ्नो नाममा पुर्जा बनाएको बञ्जाराको आरोप थियो । स्थलगत सर्जमिनमा स्थानीय प्रभुराम केसी, तुइकाजि ताम्राकार लगाएतले बोलेका थिए । कणेल परिवारको तर्फबाछ सुदिप कणेल र सुरबि शर्मा कणेलले बोलेका थिए ।
दर्ता बदर गर्न लागिएको १७ रोपनी १४ आना २ पैशा जग्गा टिकानिधिको छोरा रामनाथ कणेलको गड्कु खेत भनेर १९९८ सालको ३ महले मोठमा समेत उल्लेख भएको पाइएको छ । सर्जमिनमा जग्गाधनीले २०२६ साल देखि नै तत्कालिन मल्पी आदर्श गाउ पञ्चायतमा तिरो तिरेर भोकचलन गर्दै आएको भनि प्रमाण समेत पेश गरेका छन् । सो जग्गा २०३१ सालमा माइलो छोरा गंगा प्रसाद कणेलको नाममा नापी भै पुर्जा बनेको कुलदिप कणेलले बताउनु भएको छ ।